Home Ulo oru Europe Lys Mousset Childhood Story Plus Ihe Ntinye Aka Na-agaghị Eke Ndụ
Ulo oru Europe
LB na-egosi Full Story of a Football Genius with the nickname "Luffy“. Akụkọ Lys Mousset Childhood Story Plus Untold Biography Eziokwu na-ewetara gị akụkọ zuru oke nke ihe ndị ama ama sitere na mgbe ọ bụ nwata ruo ụbọchị.
Ndụ na ebilite nke Lys Mousset. Ebe E Si Nweta Foto: newsjizz, SportNet, footballwhispers na Transfekt
Nyocha a gụnyere ndụ nwata ya, ndabere ezinụlọ ya, akụkọ ndụ tupu aha ya, ebili na akụkọ a ma ama, ndụ mmekọrịta, ndụ onwe onye, ​​eziokwu ezinụlọ, ndụ na ihe ọmụma ndị ọzọ a na-amaghị banyere ya.
Ee, onye ọ bụla maara na ọ bụ onye na-agba ọsọ dị ike na onye rụzuru ọrụ, onye nwere ike ịzọ ndị agbachitere gara aga mgbe e nyere ya ohere. Agbanyeghị, ọ bụ naanị mmadụ ole na ole n'ime ndị egwuregwu bọọlụ na-atụle ụdị egwuregwu nke Lys Mousset's Biography nke na-atọ ụtọ nke ukwuu. Ugbu a na-enweghị inwekwu ogo, ka anyị bido.
Akụkọ hoodmụaka Lys Mousset gbakwunyere Ihe Na - adịghị Eke Ndụ Nzụlite ezinụlọ na Ndụ mbu
Malite, aha ya bụ Lys Émilien Mousset Mendy. A mụrụ ya na ndị mụrụ ya na 8th nke February 1996 na nne na nna ya na Le Havre, isi obodo ọdụ ụgbọ mmiri nke mpaghara Normandy France, France.
Lys Mousset sitere na ezinụlọ ya site na ọdụ ụgbọ mmiri Le Havre nke bụ naanị kilomita 150 na England South Coast. UNESCO kọwara obodo mara mma ebe ezinụlọ Lys Mousset bịara na 2005 dịka Ebe Ihe Nketa Worldwa na-ekele n'oge a Art Museum nke oge a na ihe osise.
Lys Mousset sitere na obodo ọdụ ụgbọ mmiri nke Le Havre. Ọ nwekwara ezinụlọ ezinụlọ Africa miri emi- site na Senegal, West Africa
Ọ bụ ezie na anyị kwenyere na Lys Mousset sitere na France. Ma na-ekpe ikpe site na ile anya ya, ị nwere ike iwepu ngwa ngwa ya site na ezinụlọ ya site na Africa. Ọ dị mma, ịkọ nkọ gị ziri ezi. Nwoke France nwere ezinụlọ ya site na mba ọdịda anyanwụ Africa nke Senegal. Ị maara?… Papa Lys Mousset bụ onye Senegal ebe nne ya, n'aka nke ọzọ, bụ French.
Mousset Lys sitere na ezinụlọ nke ụlọ ntorobịa na-etolite etolite na ndị mụrụ ya bụ ndị malitere n'oge ahụ, mere ka ọ daa site na ịgba bọl. N'adịghị ka nna ya nke na-adịghị agbasi ike, nne Lys siri ọnwụ na nwa ya nwoke agaghị emebi iwu akwụkwọ ya iji soro ndị enyi gbaa bọl. Nwoke french ahụ gosipụtara ozi (ya na foto dị n'okpuru) banyere otú o si zụlite ya na akaụntụ Twitter ya.
Mama Lys Mousset mere ka ọ gbapụ site na ịgba bọl mgbe ọ dị obere. Ebe E Si Nweta: Twitter
Akụkọ hoodmụaka Lys Mousset gbakwunyere Ihe Na - adịghị Eke Ndụ Nkụzi na ịrụ ọrụ
N'agbanyeghị esemokwu sitere n'ụlọ, Lys chọtara ụzọ isi kpofuo onwe ya na ndị enyi ya ịme bọl. Na njedebe, bọọlụ meriri agụmakwụkwọ na mgbe o kwenyechara ọtụtụ ihe, ndị nne na nna Lys karịsịa nne ya kwenyere na nrọ ya. Ma nne ma nna kwadoro, ha na-akwali nwa ha nwoke ịrụ ọrụ siri ike n'ọchịchọ ya ịghọ onye pro.
Lys dị ka ụmụaka ọ bụla ọzọ na-achọ ka nwatakịrị nwere EGO buru ibu isonyere Le Havre, ndị otu egwuregwu egwuregwu kachasị mma nke obodo ya na otu nke klọb bọọlụ French kacha ochie. Agbanyeghị, ọ maara na ọ dịghị mfe isonye na klọb asọmpi nke nwere ndị egwuregwu ụlọ akwụkwọ dịka Paul Pogba, Dimitri Payer, Riyad Mahrez, Benjamin Mendy, wdg na ha raaster.
Lys Mousset nwere akụkọ banyere ngwaahịa Mahadum ndị a ma vowụọ iyi iso nzọụkwụ ha. Ebe E Si Nweta Foto: M
Site na ihe isi ike mbu nke ịbanye na Le Havre, nwoke France ahụ weere nhọrọ ndị ọzọ. Mgbe ọ dị afọ 7, Lys malitere ịga ụlọ akwụkwọ egwuregwu bọl na mpaghara ya aha ya Soquence Graville. Ka ọ na-etolite, ọ gafere na ngalaba agụmakwụkwọ buru ibu Havre Caucriauville. Endingmefu afọ abụọ na agụmakwụkwọ ahụ hụrụ ya ka ọ tolitere na onyinye pụrụ iche, otu nke mere ka ọ chee na ọ dị njikere ịnabata ihe ịma aka ikpe na Le Havre.
Akụkọ hoodmụaka Lys Mousset gbakwunyere Ihe Na - adịghị Eke Ndụ Ndụ Ndụ Mmalite
N'oge ahụ ọ gafere ule ma sonye na Le Havre a ma ama, ọ ofụ nke ndị nne na nna Lys Mousset na ndị ezinụlọ ya amataghị. Lys sonyere aka na ụlọ akwụkwọ Le Havre n'afọ 2006 mgbe ọ gbara afọ 10.
Lys nọrọ afọ itoolu n'ịrụ ọrụ ntorobịa nke Le Havre. N’afọ 2012, ọ gụrụ akwụkwọ na Le Havre II (otu ndoputa ulo akwukwo), oge nke mepere isi ọhụrụ na ndụ ya. Mgbe ọ nọsịrị nwa oge, Mousset malitere ịmasị ihe dị na Le Havre II, na-eme ihe mgbaru ọsọ 14 tupu ya eme egwuregwu izizi maka ndị otu mbụ.
Akụkọ hoodmụaka Lys Mousset gbakwunyere Ihe Na - adịghị Eke Ndụ Ụzọ Ebube
Mgbe ọ na-erule afọ 20, agụụ agụụrụ Lys Mousset. Ọbụlagodi ọdịnihu dị ka ihe dị mma mgbe ị nọ na Le Havre, onye egwuregwu bọọlụ France nwere mmasị ịhapụ obodo ya gaa gwaa egwu ná mba ọzọ.
Mkpebi: N'oge oge 2016 –2017, Lys Mousset gbasoro nzọụkwụ Anthony Martial ka ọ hapụrụ ịchụso ọrụ ya na France. Njem ya gaa England hụrụ ya ka ọ sonyere na AFC Bournemouth onye nọ na oge nke abụọ ha na Premier League.
Ihe agabeghị dịka emebere maka nwoke France na ndịda n'ụsọ oké osimiri England. Ogbenye Lys Mousset tara ahụhụ n'ihi enweghị oge egwuregwu, mmepe nke mere ka ọ na-achịkwa naanị ihe mgbaru ọsọ ise na asọmpi niile n'afọ atọ ya na Bournemouth. N'otu oge, o kwupụtara iwe ya okwu ya nye akwụkwọ akụkọ French Paris-Normandie. O kwuru;
“Ọ bụrụ na m chọrọ ịbụ nke atọ, nke anọ ma ọ bụ nke ise n'usoro dị ka onye ọkpọ, enwere m ike ịbanye na Arsenal ma ọ bụ Tottenham.
Ọ bụ ihe jọgburu onwe ya, mana ọ na-adị m ka ahapụla m otu akụkụ, ọ na-ewute m iche na m nwere ike ịga oge na-enweghị akara maka naanị n'ihi enweghị oge egwuregwu.
N’ikwu eziokwu, ọ dị m ka m bụ onye nkiri. Enweghị m ike ịnọ otu a. M na-atụ nrọ mgbe niile ịnọ England, mana ọ bụghị n'ọnọdụ ndị a. ”.
Akụkọ hoodmụaka Lys Mousset gbakwunyere Ihe Na - adịghị Eke Ndụ Bilie na-ewu ewu
N'ụlọ, o siiri ndị ezinụlọ Mousset ike karịsịa ndị nne na nna ya ịnakwere ịhụ otu n'ime onwe ha ka ha dara na Bournemouth. N'ịchọ nhọrọ, Lys Mousset malitere njem dị iche iche na agwọ dị iche iche na sọlfọ Bekee iji mee ka a mata ya dị ka onye na-ebuso ndị otu egwuregwu egwuregwu mbụ.
N’ụbọchị iri abụọ na otu nke ọnwa Julaị n’afọ 21, Lys Mousset bịanyere aka na ọgbakọ Sheffield United nke a na-akwado ọhụrụ. Ọ bụ ihe ọma. Mousset egosiputala oge nile dị ka onye na-eme egwuregwu mbụ na Sheffield.
N’oge a na-ede akwụkwọ, akụkụ kacha pụta ìhè n’egwuregwu Mousset bụ ike ya dị egwu. Ọ bụ onye na-agba ọsọ dị ike na onye zuru oke nke nwere ike ịkwado ndị na-agbachitere gara aga mgbe e nyere ya ohere. N'okpuru ebe a bụ mpempe vidiyo vidiyo banyere ụdị egwuregwu ya (Ebe E Si Nweta Ga-NIILE 10).
Akụkọ hoodmụaka Lys Mousset gbakwunyere Ihe Na - adịghị Eke Ndụ Ndụ mmekọrịta
Site na ịrị elu ya na Sheffield United, o doro anya na ọ ga-abụrịrị na ọtụtụ ndị fan ama atụgharịrị ma Lys Mousset nwere enyi nwanyị ma ọ bụ nwunye. Ee, ọ dịghị agọnahụ eziokwu ahụ na ọ mara mma. Nwa ya chere ihu na-adọrọ mmasị n'ezie n'ezie na-etinye ya kachasị elu na ndepụta nwanyị ọ bụla chọrọ ịhụnanya.
Ọnye na-bụ Lys Mousset Girlfriend
Lys Mousset ejula ndị ọchị bọọlụ anya n’ụzọ ọ na-eme ka mmekọrịta ya na onwe ya ghara ịdị. Site na njem nzuzo na iwepụ Instagram, enyi nwanyị Lys Mousset na mama mama ekwenyela na nwoke ya ịhapụ ịnọ n'ọsọ.
Lys Mousset nwere nwa nwanyị
Lys Mousset bụ onye ama ama n’egwuregwu Bekee, ọ dịkwa mkpa karịa nwa ya nwanyị. N'agbanyeghị usoro ọrụ ya dị ka onye na-agba ụkwụ, Lys maara otú e si ekepụta oge na iji soro ụmụ nwanyị nọrịa
Obi abụọ adịghị ya, obere nwa ya nwanyị na-ewepụta sọtụ dị na ya, mmepe nke mere ka ọ bụrụ otu n'ime nna na-egwuri egwu nna.
Akụkọ hoodmụaka Lys Mousset gbakwunyere Ihe Na - adịghị Eke Ndụ Ndụ nke Onye
Tomata ndụ onwe onye nke Lys Mousset na-anọghị na football ga-enyere gị aka ịmata onye ọ bụ nke ọma.
Na-amalite apụ, ọ bụ onye nwere mmụọ dị jụụ, dị jụụ ma chikọtara. N'egwuregwu bọọlụ, Lys hụrụ n'anya ịnọ ogologo na Balcony mara mma nke nwere ọhụụ dị ịtụnanya na etiti obodo South Yorkshire. Ọ na-ahụ onwe ya n'anya dị ka ntutu dị ọcha na nke dị jụụ na mma ya na-enweghị ike ịgbagha agbagha n'anya ya.
Tomata Lys Mousset Ndụ Nkeonwe. Ebe E Si Nweta Foto: Instagram
Akụkọ hoodmụaka Lys Mousset gbakwunyere Ihe Na - adịghị Eke Ndụ si ebi ndụ
Site n'ego ụgwọ a na-akwụ kwa izu nke ihe ruru £ 1,037,089 kwa afọ, Lys Mousset nwere onyinye nke ukwuu ibi ndụ dị ala nke na-egosi ụdị ndụ obibi. Dịka a hụrụ n'okpuru, Lys na-azụta uwe dị oke ọnụ, elekere, akpụkpọ ụkwụ ma kachasị mkpa, ga-ejide n'ụgbọ ya dị oke ọnụ.
Lys Mousset nwere onyinye nke ibi ndụ dị umengwụ ma enwere ike ịhụ nke a n'ụgbọ ya na n'echiche ejiji. Ebe E Si Nweta Foto: Instagram
N'ikwu ya n'ụzọ dị mfe, ụzọ Mousset si ewepụta ụgwọ ọrụ ya na ibi ụdị ndụ dị oke ọnụ bụ otu o siri kwe nkwa ya na ebe a na-egwu egwuregwu.
Akụkọ hoodmụaka Lys Mousset gbakwunyere Ihe Na - adịghị Eke Ndụ Ndụ Ezinụlọ
Mgbe ọ na-arụ ọrụ ọrụ, Gini bụ kacha nso maka Ezinaụlọ Lys Mousset?. Azịza ya bụ ihe nketa ezinụlọ ya na Senegal. Lys na-ejigide mkpọrọgwụ ezinụlọ ya nke Senegal ma nwee ụzọ ijikọ ụmụnne ya Senagalese ma gosipụta ihe nketa ya na ìgwè eji agba mara mma.
Nke kacha nso n’ebe ezinaụlọ Lys Mousset dị. Ebe E Si Nweta Foto: Instagram
Dị ka n'oge edere, ezinụlọ Lys na-ebi ndụ ugbu a na nke enweghị isi n'agbanyeghị paparazzi na-aga n'ihu na ọtụtụ ụzọ iji jikọọ na mgbasa ozi mmekọrịta. Agbanyeghị, oihe doro anya. Mama ya, nna ya, nwanne ya nwoke, nwanne (nwanne) ya na ndị ikwu ya niile na-erite uru ugbu a inwe otu onye n'ime ha bụ onye na-ahụ maka okwu egwuregwu Bekee. Naanị oge tupu anyị agaa hụ ndị ezinaụlọ ya na social media.
Akụkọ hoodmụaka Lys Mousset gbakwunyere Ihe Na - adịghị Eke Ndụ Eziokwu efu
Eziokwu: Afọ Amụrụ ya: Ị maara?… N’afọ 1996 afọ a mụrụ Lys Mousset, enweghị Google, Facebook, Twitter, YouTube na Reddit. Ọzọkwa, enweghị LinkedIn, Pinterest, Tumblr, Snapchat na Flickr. N'otu aka ahụ, iPhones, ekwentị igwefoto, iPods, Skype, Gmail, Wikipedia na iTunes adịghị adị. N'afọ ahụ hụrụ ntọhapụ nke Nintendo 64.
Eziokwu: Lys Mousset's Religion: Obodo o siri bia, Le Havre kewara ekewa asatọ ma nwee ebe ofufe iri abụọ na anọ (ụka na ụlọ ekpere). Agbanyeghị, ihe ndị na-adịghị adị na foto nke ihe omume okpukpe ya emeela ka anyị chee na Mousset nwekwara ike ịbụ enweghị iwu.
Eziokwu: Lys Mousset's Tattoo: Anyị niile maara Ogbugbu egbugbu bu ihe ama ama n’egwuregwu bọọlu nke oge a dika a na-ejikarị ya gosiputa okpukpe mmadu ma obu ndi ha huru n’anya. Lys Mousset n'oge ede ederede enweghị edemede. Dịka a hụrụ n'okpuru foto ya na ezigbo enyi AFC Bournemouth Jordan Ibe, enweghị isi dị ya na elu.
Lys Mousset Tattoo Eziokwu. Ebe E Si Nweta Foto: WTFoot
Nyochaa: Daalụ maka ịgụ akwụkwọ akụkọ ụmụaka nke Lys Mousset Plus Untold Biography Facts. Na LifeBogger, anyị na-agba mbọ maka izi ezi na izi ezi. Ọ bụrụ n’ịchọta ihe adịghị mma, biko kesaa ya nye anyị site na ịza ajụjụ n’okpuru. Anyị ga-eji echiche gị niile kwanyere ma kwanyere ùgwù ùgwù.
Ọkọlọtọ nke French
Dayot Upamecano Childhood Story Plus Ihe Ntinye Ucheld Biography
Boubakary Soumare Childhood Akụkọ gbakwunyere Eziokwu Biography Eziokwu
Neal Maupay Childhood Story Plus Ihe Na-adịghị Agụkọ Njikwa Ndụ
Moussa Dembele Child Story Plus Na-enweghị Nkọwa Eziokwu
Tyrone Mings Childhood Story Plus Ihe Nkwupụta Banye Na-adịghị Eke Ndụ
AKWỤKWỌ NKE CLASSIC
AK UNKỌ AK UNKỌ BT́ EGO
Nwere ike 20, 2017
Nwere ike 13, 2017
Ulo oru Europe353
AKWỤKWỌ NKE CLASSIC32
© Copyright 2016 - Isiokwu nke HagePlex Technologies mere
Laurent Koscielny Child Story Plus Ihe na-emeghi ihe omuma
Nabil Fekir Child Story Plus Ihe na-emeghi ihe omuma
Sebastien Haller Child Akụkọ Plus na-enweghị isi akụkọ eziokwu
Nwa Samir Nasri Akụkọ Nke Na-emeghe Ihe Echiche